चीन रिबन ब्लेंडर निर्माण र कारखाना | शीर्ष
तेर्सो रिबन ब्लेंडर व्यापक रूप मा खाना, फार्मास्यूटिकल्स, रासायनिक उद्योगहरु र यति मा लागू गरीन्छ। यो विभिन्न पाउडर, तरल स्प्रे संग पाउडर, र ग्रेन्युल संग पाउडर मिश्रण गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। मोटर को संचालित अन्तर्गत, डबल हेलिक्स रिबन ब्लेंडर सामग्री बनाउँछ छोटो समयमा एक उच्च प्रभावी convective मिश्रण प्राप्त।
सूखी पाउडर मिश्रण को लागी रिबन ब्लेंडर
तरल स्प्रे संग पाउडर को लागी रिबन ब्लेंडर
ग्रेन्युल मिश्रण को लागी रिबन ब्लेंडर
रिबन ब्लेंडर मिक्सर मेरो उत्पादन ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ?
बाहिरी रिबन पक्षहरु बाट केन्द्र सम्म सामाग्री ल्याउँछ।
भित्री रिबन केन्द्र बाट छेउमा सामग्री धक्का।
कसरी गर्छ रिबन ब्लेंडर मिक्सर काम?
रिबन ब्लेंडर डिजाइन
1: ब्लेंडर कभर; २: बिजुली क्याबिनेट र नियन्त्रण प्यानल
3: मोटर र Reducer; 4: ब्लेंडर टैंक
5: वायवीय वाल्व; 6: होल्डर र मोबाइल कास्टर
Connection सबै जडान भागहरु मा पूर्ण वेल्डिंग।
30 सबै 304 स्टेनलेस स्टील, र पूर्ण दर्पण टैंक भित्र पॉलिश।
■ विशेष रिबन डिजाइन कुनै मृत कोण बनाउँछ जब मिश्रण।
डबल सुरक्षा शाफ्ट सील मा पेटेंट टेक्नोलोजी।
■ थोरै अवतल फ्लैप वायवीय द्वारा नियंत्रित निर्वहन वाल्व मा कुनै रिसाव प्राप्त गर्न को लागी।
Sil सिलिकन रिंग ढक्कन डिजाइन संग गोल कुना।
Inter सुरक्षा इन्टरलक, सुरक्षा ग्रिड र पाels्ग्रा संग।
■ ढिलो बढ्दै हाइड्रोलिक रहन बार लामो जीवन रहन्छ।
कसरी एक रिबन ब्लेंडर मिक्सर मिसिन छनौट गर्न?
1. सबै काम टुक्राहरु पूर्ण वेल्डिंग द्वारा जडित छन्। कुनै अवशिष्ट पाउडर र मिश्रण पछि सजिलो सफाई।
2. गोल कुना र सिलिकन रिंग रिबन ब्लेंडर कभर सफा गर्न सजिलो बनाउनुहोस्।
3. ३०४ स्टेनलेस स्टील रिबन ब्लेंडर पूरा गर्नुहोस्। रिबन र शाफ्ट सहित मिश्रण टैंक भित्र पूर्ण दर्पण पॉलिश।
4. टैंक को तल केन्द्र मा थोरै अवतल फ्लैप, जो कुनै सामग्री बाँकी र कुनै मृत कोण मिश्रण जब सुनिश्चित गर्दछ।
5. जर्मनी ब्रान्ड Burgmann प्याकि g्ग ग्रंथि संग डबल सुरक्षा शाफ्ट सील डिजाइन शून्य लीक सुनिश्चित गर्दछ जब पानी संग परीक्षण, जो एक पेटेंट को लागी लागू गरीएको छ।
6. ढिलो बढ्दो डिजाइन हाइड्रोलिक रहन बार लामो जीवन रहन्छ।
7. इन्टरलक, ग्रिड र सुरक्षित र सुविधाजनक प्रयोग को लागी पाels्ग्रा।
रिबन ब्लेंडर चित्र प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
रिबन र प्याडल ब्लेंडर को उपस्थिति उस्तै छ। फरक मात्र रिबन र प्याडल को बीच उत्तेजक छ।
रिबन पाउडर र बन्द घनत्व संग सामग्री को लागी उपयुक्त छ, र मिश्रण को समयमा अधिक बल को आवश्यकता छ।
प्याडल चावल, नट, सेम र यति मा जस्तै ग्रेन्युल को लागी उपयुक्त छ। यो घनत्व मा ठूलो फरक संग पाउडर मिश्रण मा प्रयोग गरीन्छ।
यसबाहेक, हामी रिबन संग प्याडर संयोजन हलचल अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ, जो माथी दुई प्रकार को पात्रहरु को बीच सामग्री को लागी उपयुक्त छ।
कृपया हामीलाई तपाइँको सामग्री थाहा दिनुहोस् यदि तपाइँलाई थाहा छैन कि कुन उत्तेजक तपाइँको लागी अधिक उपयुक्त छ। तपाइँ हामी बाट एक राम्रो समाधान पाउनुहुनेछ।
एक: लचीला सामाग्री चयन
सामग्री विकल्प SS304 र SS316L। र दुई सामाग्री संयोजन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
स्टेनलेस स्टील को सतह लेपित teflon, तार चित्र, चमकाने र दर्पण चमकाने सहित को उपचार, विभिन्न रिबन ब्लेंडर भागहरु मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
B: विभिन्न inlets
रिबन पाउडर ब्लेंडर को ब्यारल शीर्ष आवरण विभिन्न मामलाहरु अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
C: उत्कृष्ट निर्वहन भाग
को रिबन ब्लेंडर निर्वहन वाल्व म्यानुअल वा वायवीय संचालित गर्न सकिन्छ। वैकल्पिक वाल्व: सिलिन्डर भल्भ, पुतली भल्भ आदि।
सामान्यतया वायवीय मैनुअल एक भन्दा राम्रो सील छ। र मिश्रण टैंक र भल्भ कोठा मा कुनै मृत परी छैन।
तर केहि ग्राहकहरु को लागी, म्यानुअल भल्भ निर्वहन मात्रा नियन्त्रण गर्न को लागी अधिक सुविधाजनक छ। र यो झोला बगिरहेको संग सामाग्री को लागी उपयुक्त छ।
डी: चयन योग्य अतिरिक्त प्रकार्य
डबल पेचदार रिबन ब्लेंडर कहिलेकाँही ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु को कारणले अतिरिक्त कार्यहरु लाई सुसज्जित गर्न को लागी आवश्यक छ, जस्तै हीटिंग र कूलिंग को लागी ज्याकेट प्रणाली, तौल प्रणाली, धूल हटाउने प्रणाली ， स्प्रे प्रणाली र यति मा।
एक: समायोज्य गति
पाउडर रिबन ब्लेंडर मिसिन एक आवृत्ति कनवर्टर स्थापना गरेर समायोज्य गति मा अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
बी: लोड प्रणाली
को संचालन गर्न को लागी औद्योगिक रिबन ब्लेंडर मिसिन अधिक सुविधाजनक, सानो मोडेल मिक्सर को लागी सीढीहरु, ठूलो मोडेल मिक्सर को लागी कदम संग प्लेटफर्म, वा स्वचालित लोडिंग को लागी स्क्रू फीडर सबै उपलब्ध छन्।
स्क्रू कन्वेयर, बाल्टी कन्वेयर र भ्याकुम कन्वेयर: स्वचालित लोड भाग को लागी, त्यहाँ कन्वेयर को तीन प्रकार छनौट गर्न सकिन्छ। हामी तपाइँको उत्पादन र स्थिति को आधार मा सबैभन्दा उपयुक्त प्रकार छान्नेछौं। उदाहरण को लागी: वैक्यूम लोडिंग प्रणाली उच्च उचाई फरक लोडिंग को लागी अधिक उपयुक्त छ, र अधिक लचीलो छ साथै कम ठाउँ को आवश्यकता छ। पेंच कन्वेयर केहि सामग्री को लागी उपयुक्त छैन जुन चिपचिपा हुन्छ जब तापमान थोरै अधिक हुन्छ, तर यो कार्यशाला को लागी उपयुक्त छ जो सीमित उचाई छ। बाल्टी कन्वेयर ग्रेन्युल कन्वेयर को लागी उपयुक्त छ।
डबल रिबन ब्लेंडर उत्पादन लाइनहरु बनाउन पेंच कन्वेयर, कूदनेवाला र बरमा फिलर संग काम गर्न सक्छ।
पाउडर मिश्रण र भरने लाइन को अधिक जानकारी प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
उत्पादन लाइन धेरै ऊर्जा र समय को लागी तपाइँ म्यानुअल अपरेशन संग तुलना को लागी बचत गर्नुहोस्।
लोडि system प्रणाली दुई मेसिनहरु लाई पर्याप्त सामग्री समयमै उपलब्ध गराउन जोड्नेछ।
यो तपाइँ कम समय लिन्छ र तपाइँ उच्च दक्षता ल्याउँछ।
उत्पादन र प्रशोधन
1. तपाइँ एक औद्योगिक रिबन ब्लेंडर निर्माता हुनुहुन्छ?
शंघाई माथिल्लो समूह कं, लिमिटेड चीन मा अग्रणी रिबन ब्लेंडर निर्माताहरु मध्ये एक हो, जो दस बर्ष भन्दा बढी को लागी मेशिन उद्योग पैकिंग मा भएको छ। हामीले हाम्रा मेशिनहरु लाई दुनिया भर मा 80 भन्दा बढी देशहरुमा बेचेका छौं।
हाम्रो कम्पनी रिबन ब्लेंडर डिजाइन को आविष्कार पेटेंट को रूप मा साथै अन्य मिसिनहरु को एक संख्या छ।
हामी डिजाइन, निर्माण को रूप मा राम्रो संगै एक मेशीन वा सम्पूर्ण पैकिंग लाइन अनुकूलन को क्षमता छ।
2. तपाइँको पाउडर रिबन ब्लेंडर CE प्रमाणपत्र छ?
न केवल पाउडर रिबन ब्लेंडर तर हाम्रो सबै मिसिनहरु CE प्रमाणपत्र छ।
3. रिबन ब्लेंडर वितरण समय कति लामो छ?
यो एक मानक मोडेल उत्पादन गर्न 7-10 दिन लाग्छ।
अनुकूलित मिसिन को लागी, तपाइँको मेशिन 30-45 दिन मा गर्न सकिन्छ।
यसबाहेक, हावा द्वारा पठाइएको मेसिन को बारे मा 7-10 दिन छ।
रिबन ब्लेंडर समुद्र द्वारा वितरित 10-60 दिन को बारे मा फरक दूरी अनुसार छ।
4. तपाइँको कम्पनी सेवा र वारंटी के हो?
तपाइँ अर्डर गर्नु भन्दा पहिले, हाम्रो बिक्री तपाइँ संग सबै विवरणहरु लाई कुराकानी गर्दछ जब सम्म तपाइँ हाम्रो टेक्नीशियन बाट एक सन्तोषजनक समाधान पाउनुहुन्छ। हामी तपाइँको उत्पादन वा चीन को बजार मा एक समान हाम्रो मशीन को परीक्षण गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तब तपाइँ फिर्ता फिर्ता देखाउन को लागी भिडियो फिड।
भुक्तानी अवधि को लागी, तपाइँ निम्न सर्तहरु बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ:
एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम, पेपैल
अर्डर गरे पछि, तपाइँ हाम्रो कारखाना मा तपाइँको पाउडर रिबन ब्लेंडर जाँच गर्न निरीक्षण निकाय नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ।
शिपिंग को लागी, हामी EXW, FOB, CIF, DDU र यस्तै मा अनुबंध मा सबै शब्द स्वीकार गर्दछौं।
वारंटी र सेवा पछि:
■ दुई वर्ष वारंटी, तीन बर्ष इन्जिन इन्जिन, जीवन-लामो सेवा
(ग्यारेन्टी सेवा सम्मानित गरिनेछ यदि क्षति मानव वा अनुचित अपरेशन को कारणले गर्दा छैन)
Price अनुकूल मूल्य मा सहायक भागहरु प्रदान गर्नुहोस्
Config कन्फिगरेसन र कार्यक्रम नियमित अपडेट गर्नुहोस्
24 २४ घण्टामा कुनै प्रश्नको जवाफ
Service साइट सेवा वा अनलाइन भिडियो सेवा
5. तपाइँ डिजाइन र समाधान को प्रस्ताव को क्षमता छ?
निस्सन्देह, हामी पेशेवर डिजाइन टीम र अनुभवी ईन्जिनियर छ। उदाहरण को लागी, हामी सिंगापुर BreadTalk को लागी एक रोटी सूत्र उत्पादन लाइन डिजाइन गरीयो।
6. तपाइँको पाउडर मिश्रण ब्लेंडर मिसिन CE प्रमाणपत्र छ?
हो, हामी पाउडर मिश्रण उपकरण CE प्रमाणपत्र छ। र न केवल कफी पाउडर मिश्रण मिसिन, हाम्रा सबै मिसिनहरु CE प्रमाणपत्र छ।
यसबाहेक, हामी पाउडर रिबन ब्लेंडर डिजाइन को केहि प्राविधिक पेटेंट छ, जस्तै शाफ्ट सीलिंग डिजाइन, साथै बरमा फिलर र अन्य मिसिन उपस्थिति डिजाइन, धूल-प्रमाण डिजाइन।
7. कस्ता उत्पादनहरु रिबन ब्लेंडर मिक्सर ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ?
रिबन ब्लेंडर मिक्सर पाउडर वा ग्रेन्युल मिश्रण को सबै प्रकार को ह्यान्डल गर्न सक्छ र व्यापक रूप मा खाना, औषधि, रसायन र यति मा लागू गरीन्छ।
खाद्य उद्योग: सबै प्रकारको खाना पाउडर वा ग्रेन्युल मिश्रण जस्तै आटा, ओट आटा, प्रोटीन पाउडर, दूध पाउडर, कफी पाउडर, मसला, खुर्सानी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कफी बीन, चामल, अन्न, नुन, चिनी, पालतू खाना, पेपरिका, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्युलोज पाउडर, xylitol आदि
औषधि उद्योग: मेडिकल पाउडर वा ग्रेन्युल मिश्रण को सबै प्रकार एस्पिरिन पाउडर, ibuprofen पाउडर, cephalosporin पाउडर, amoxicillin पाउडर, पेनिसिलिन पाउडर, clindamycin पाउडर, azithromycin पाउडर, domperidone पाउडर, amantadine पाउडर, acetaminophen पाउडर आदि।
रासायनिक उद्योग: छालाको हेरचाह र सौन्दर्य प्रसाधन पाउडर वा उद्योग पाउडर मिश्रण को सबै प्रकार, प्रेस पाउडर, अनुहार पाउडर, वर्णक, आँखा छाया पाउडर, गाल पाउडर, चमक पाउडर, हाइलाइटि powder पाउडर, बेबी पाउडर, तालक पाउडर, फलाम पाउडर, सोडा खरानी, क्याल्सियम कार्बोनेट पाउडर, प्लास्टिक कण, polyethylene आदि
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यदि तपाइँको उत्पादन रिबन ब्लेंडर मिक्सर मा काम गर्न सक्छ जाँच गर्न को लागी।
8. उद्योग रिबन blenders कसरी काम गर्छन्?
डबल तह रिबन जो खडा र विपरीत स्वर्गदूतहरु मा बारी विभिन्न सामाग्री मा एक संवहन बनाउन को लागी कि यो एक उच्च मिश्रण दक्षता सम्म पुग्न सक्छ।
हाम्रो विशेष डिजाइन रिबन मिश्रण टैंक मा कुनै मृत कोण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रभावकारी मिश्रण समय मात्र 5-10 मिनेट हो,3मिनेट भित्र पनि कम।
9. कसरी एक डबल रिबन ब्लेंडर चयन गर्न?
Rib रिबन र प्याडल ब्लेंडर बीच चयन गर्नुहोस्
एक डबल रिबन ब्लेंडर चयन गर्न को लागी, पहिलो कुरा यो पुष्टि गर्न को लागी यदि रिबन ब्लेंडर उपयुक्त छ।
डबल रिबन ब्लेंडर समान पाउन्ड वा ग्रेन्युल समान घनत्व संग मिश्रण को लागी उपयुक्त छ र जो तोड्न को लागी सजिलो छैन। यो सामाग्री जो पिघ्न वा उच्च तापमान मा चिपचिपा प्राप्त हुनेछ को लागी उपयुक्त छैन।
यदि तपाइँको उत्पादन मिश्रण धेरै फरक घनत्व संग सामग्री मिलेर बनेको छ, वा यो भंग गर्न को लागी सजिलो छ, र जो पिघलाउँछ वा चिपचिपा हुन्छ जब तापमान अधिक हुन्छ, हामी तपाइँलाई प्याडल ब्लेंडर चयन गर्न को लागी सिफारिश गर्दछौं।
किनकि काम गर्ने सिद्धान्त फरक छन्। रिबन ब्लेंडर राम्रो मिश्रण दक्षता प्राप्त गर्न को लागी विपरीत दिशा मा सामाग्री सार्दछ। तर प्याडल ब्लेंडर ट्यांक तल बाट सामग्री माथि ल्याउँछ, ताकि यो सामाग्री पूरा राख्न र मिश्रण को समयमा तापमान माथि जाने छैन बनाउन सक्छ। यो ठूलो घनत्व टैंक तल मा रहन संग सामग्री बनाउन छैन।
A एक उपयुक्त मोडेल छान्नुहोस्
एक पटक रिबन ब्लेंडर को उपयोग को पुष्टि, यो भोल्युम मोडेल मा निर्णय गर्न मा आउँछ। सबै आपूर्तिकर्ताहरु बाट रिबन blenders प्रभावी मिश्रण भोल्युम छ। सामान्यतया यो लगभग 70%हो। जे होस्, केहि आपूर्तिकर्ताहरु कुल मिश्रण भोल्युम को रूप मा आफ्नो मोडेल को नाम, जबकि हामी जस्तै केहि प्रभावी मिश्रण भोल्युम को रूप मा हाम्रो रिबन ब्लेंडर मोडेल को नाम।
तर अधिकांश निर्माताहरु आफ्नो उत्पादन वजन को रूप मा भोल्युम को व्यवस्था गर्दैनन्। तपाइँ आफ्नो उत्पादन घनत्व र ब्याच वजन अनुसार उपयुक्त मात्रा गणना गर्न आवश्यक छ।
उदाहरण को लागी, निर्माता टीपी 500kg आटा प्रत्येक ब्याच उत्पादन गर्दछ, जसको घनत्व 0.5kg/L हो। उत्पादन 1000L प्रत्येक ब्याच हुनेछ। के TP चाहिन्छ एक 1000L क्षमता रिबन ब्लेंडर हो। र TDPM 1000 मोडेल उपयुक्त छ।
कृपया अन्य आपूर्तिकर्ताहरु को मोडेल मा ध्यान दिनुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि १००० एल उनीहरुको क्षमता कुल भोल्युम हैन।
Ib रिबन ब्लेंडर गुणस्तर
पछिल्लो तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उच्च गुणवत्ता संग एक रिबन ब्लेंडर छान्नु हो। निम्न को रूप मा केहि विवरण सन्दर्भ को लागी हो जहाँ समस्याहरु प्राय एक रिबन ब्लेंडर मा हुने सम्भावना हुन्छ।
शाफ्ट सील: पानी संग परीक्षण शाफ्ट सील प्रभाव देखाउन सक्छ। शाफ्ट सीलिंग बाट पाउडर रिसाव सधैं प्रयोगकर्ताहरुलाई परेशान गर्दछ।
निर्वहन सील: पानी संग परीक्षण पनि निर्वहन सील प्रभाव देखाउँछ। धेरै प्रयोगकर्ताहरु डिस्चार्ज बाट रिसाव भेटेका छन्।
पूर्ण वेल्डिंग: पूर्ण वेल्डिंग खाना र औषधि मिसिनहरु को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग मध्ये एक हो। पाउडर खाली मा लुकाउन सजिलो छ, जो ताजा पाउडर प्रदूषित गर्न सक्छ यदि अवशिष्ट पाउडर खराब हुन्छ। तर पूर्ण वेल्डिंग र पोलिश हार्डवेयर जडान, जो मेशिन गुणस्तर र उपयोग अनुभव देखाउन सक्नुहुन्छ बीच कुनै अन्तर गर्न सक्दैन।
सजीलो सफाई डिजाइन: एक सजिलो सफाई रिबन ब्लेंडर धेरै समय र ऊर्जा को लागी जो लागत को बराबर छ बचत हुनेछ।
10. रिबन ब्लेंडर मूल्य के हो?
रिबन ब्लेंडर मूल्य क्षमता, विकल्प, अनुकूलन मा आधारित छ। कृपया हामीलाई तपाइँको उपयुक्त रिबन ब्लेंडर समाधान र प्रस्ताव प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्।
11. मेरो नजिक बिक्री को लागी एक रिबन ब्लेंडर कहाँ पाउन?
हामी धेरै देशहरु मा एजेन्टहरु छन्, जहाँ तपाइँ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो रिबन ब्लेंडर को कोशिश, जो तपाइँ एक शिपिंग र सीमा शुल्क निकासी साथै सेवा पछि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। छूट गतिविधिहरु एक बर्ष को समय समय मा आयोजित गरीन्छ। कृपया हामीलाई रिबन ब्लेंडर को नवीनतम मूल्य प्राप्त गर्न को लागी सम्पर्क गर्नुहोस्।
अघिल्लो: डबल रिबन मिक्सर
अर्को: पाउडर बरमा फिलर
डबल पेचदार रिबन ब्लेंडर
डबल हेलिक्स रिबन ब्लेंडर
डबल लेबर्स रिबन ब्लेंडर
तेर्सो रिबन ब्लेंडर
औद्योगिक रिबन ब्लेंडर मिसिन
पाउडर रिबन ब्लेंडर
पाउडर रिबन ब्लेंडर मिसिन
रिबन ब्लेंडर आरेख
रिबन ब्लेंडर निर्वहन वाल्व
पाउडर को लागी रिबन ब्लेंडर
पाउडर मिश्रण को लागी रिबन ब्लेंडर
रिबन ब्लेंडर बिक्री को लागी
रिबन ब्लेंडर मिसिन
रिबन ब्लेंडर मिसिन मूल्य
रिबन ब्लेंडर निर्माता
रिबन ब्लेंडर निर्माताहरु
रिबन ब्लेंडर मिक्सर मिसिन
रिबन ब्लेंडर पार्ट्स
रिबन ब्लेंडर मूल्य
रिबन पाउडर ब्लेंडर
सानो रिबन ब्लेंडर